Lixa Oromiyaatti galmeen filattootaa haala gaariin gaggeeffamaa jira jedhame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Finfinnee, Caamsaa 5, 2013 (FBC) – Godinaalee Lixa Oromiyaatti galmeen filattootaa haala gaariin gaggeeffamaa jiraachuu ibsameera.
Akka OBN gabaaseetti,adeemsi galmee filattootaa filannoo marsaa 6ffaa yeroo dhiyoo keessa kan eegale Godinaalee Lixa Oromiyaa arfan keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira.
Haala gabatee yeroo Boordiin Filannoo Biyyaalessaa galmee filattootaaf kaa’een godinaalee Oromiyaa heddu keessatti adeemsi galmee filattootaa gaggeeffamaa turus, godinaalee Lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaan baatii 1 fi walakkaaf booddeetti hafuun eegalamuun isaa kan yaadatamuudha.
Godinaaleen Lixa Oromiyaa arfan galmee filattootaa akka raawwataniif Boordiin Filannoo biyyaalessaa Eebila 29 – Caamsaa 13, 2013 akka gaggeeffamu murtoo dabarseen haala gaariin raawwatamaa jiraachuu himameera.
Qaamoleen seera kabachiisan wayita filannoo mirga namoomaa akka kabajan waamichi…
Hidha Haaromsaa ilaalchisee hayyoota Yuunvarsiitiif ibsi taasiifame
Manneen Murtii Federaalaa guyyaa filannoo gariin banaa…
Qaamoleen seera kabachiisan wayita filannoo mirga namoomaa…